KASHIFAAD: Shirkado ay Facebook & Twitter ku jiraan oo balaayiin doollar DF Maraykanka uga qaatay xogo & adeegyo ay u gudbiyeen | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka KASHIFAAD: Shirkado ay Facebook & Twitter ku jiraan oo balaayiin doollar DF...
KASHIFAAD: Shirkado ay Facebook & Twitter ku jiraan oo balaayiin doollar DF Maraykanka uga qaatay xogo & adeegyo ay u gudbiyeen
(Hadalsame) 11 Sebt 2021 – Camaaliqooyinka tiknolojiyadda sare sida Amazon, Facebook, Google, Microsoft iyo Twitter ayaa tan iyo 2004 waxay balaayiin doollar ka heleen DF Maraykanka iyo hay’aadkeeda markii uu bilowday ololaha loogu yeero ”la dagaallanka argagixisada.”
“Min 2004 ilaa maanta, waxay shirkadaani guddoomayeen dalabyo ka imanayey DF oo adeegyadooda u baahnayd, gaar ahaan Pentagon, Wasaaradda Arr. Dibedda iyo tan Amaanka Qaranka,” ayaa lagu yiri warbixin hadda soo baxday.
Waxyaabaha laga dalbaday waxaa ka mid ahaa inay hay’aadka sirdoonka u sameeyaan adeegyo xog ururin ah iyo sidoo kale inay u sahlaan qaabka kaydinta daruurta (clouding) iyo GPS-ka, taasoo keentay inay balaayiin lacag ah helaan.
Wasaaradda Gaashaandhigga oo qura ayaa $43.8 bilyan oo doollar ku khasirtay adeegyo ay ka iibsatey shirkadahan tan iyo 2004-tii, si ay ugu adeegsato dagaallada ay dunida ka waddey.
“Amazon iyo Microsoft ayaa gaar ahaan aad u helayey qandaraasyo iyadoo Amazon gashay 5 qandaraas, halka Microsoft ay saxiixday 8 kale intii u dhaxaysey 2015-2019.” ayaa lagu yiri warbixinta oo xustay in xilligii Trump ay lix laabmeen qandaraasyada la siiyey Microsoft.
Waxaa taa biddaalkeeda sanadihii dambe hoos u dhacay “qandaraasyadii soo jireenka ahaa” ee la siin jirey sharikaadka ciidamada la macaamili jirey sida kuwa cirka ee Raytheon iyo Northrop Grumman.
Waxaa kale oo tooshka lagu shiday lana dhaliilay “jidadka is gooynaya” ee sharikaadkan tiknolojiyadda iyo madaxda hay’aadka sirdoonka Maraykanka qaarkood.
Tusaale, Jared Cohen, oo ka tirsanaa madaxda sare ee Wasaarad Dibadeedka dalkaasi ayaa haatan xil ka haya Google, sidoo kale ninka Amazon ku biiray ee Steve Pandelides ayaa horay uga tirsanaa FBI, halka ninka haatan Microsoft wax ka maamula ee Joseph D. Rozek, oo ka mid ahaa raggii asaasay hay’adda Amaanka Qaranka.
Previous article3 qodob oo NISA ku saabsan oo asaas u ah heshiis laga gaaro wada hadalka soconaya
Next articleTOOS u daawo: Crystal Palace vs Tottenham – LIVE (Shaxda Sugan)